Maxay labada macallin iyo ciyaartoyda labada naadi ka yiraahdeen kulanka caawa ee Man City vs Chelsea? – Gool FM
(Porto) 29 Maajo 2021. Macallimiinta labada koox iyo qaar ka mid ah xiddigaha labada naadi ayaa siyaabo kala duwan kaga hadlay ciyaarta ay caawa isaga hor imaan doonaan kooxaha Manchester City iyo Chelsea ee Fiinaalka tartanka Champions League.
Haddii aan eegno dhanka macallimiinta, Pep Guardiola ayaa ka hadlay ciyaartan, waxaana uu sheegay inay farxad gaar ah u tahay inuu mar kale soo tiigsado Fiinaalka Champions League, waxaana uu yiri: “Waxaan ku noqday ninka dunida ugu farxadda badan inaan halkaan joogo, waana ii sharaf iyo karaamo.”
“Waxaan dooneynaa inaan isugu dayno sida ugu wanaagsan, waxa na laga rabo ayaa ah inaan nafteenna daacad u ahaanno oo aan isku dayno inaan guuleysanno” ayuu yiri macallinka Manchester City.
Waxaa sidoo kale ciyaartan ka hadlay kubbad sameeyaha Man City ee Kevin De Bruyne, waxaana uu yiri: “Dhammaanteenna waxaan nahay tartammayaal, waxaanna dooneynaa inaan guuleysanno. Ciyaartoy ahaan, weynu dareensannahay culeyska kulankan, haddii aad guuleysato waxaad tahay geesi, haddaad guuldarreysatana waxaad ku dhowdahay inaad wax walba khasaarto”.
Dhinaca kale, Chelsea macallinkeeda Thomas Tuchel ayaa geestiisa ka hadlay ciyaartan, waxaana uu sheegay inuu aad u fahansan yahay awoodda kooxda uu ka hor tagayo ee Manchester City.
“Marka aad tahay caruur, waxaad ku riyooneysaa ciyaarahan oo kale, waxayna la mid tahay adiga oo dayaxa daawanaya, balse aad ayay uga fogtahay – marka aad soo gaarto, waad soo gaartay” ayuu yiri Tuchel.
“Kama laba-labeynayo inaan iraahdo Man City iyo Bayern Munich waxay ahaayeen kuwo khatar badan xilli ciyaareedkan iyo kii ka horreeyay, waxaan isku dayeynaa inaan soo gaabinno farqiga, waxa ugu fiican kubadda cagta ayaana ah inaad soo gaabin karto kala duwanaashaha 90 daqiiqo gudahood” ayuu hadalkiisa kusii daray macallinkii hore ee Borussia Dortmund.
Sidoo kale, waxaa ciyaartan ka hadlay kabtanka Blues ee César Azpilicueta, waxaana uu yiri: “Chelsea marwalba waxay u dagaallantaa waxa walba, berri (xalay ayuu ka hadlay ciyaarta) waxaan noqon karnaa horyaalka Yurub, waa ciyaar weyn, waanna ogahay inay tahay inaan soo bandhigno dadaalkeenna ugu badan, waa maalin gaar ah, waxaan dib u heleynaa taageerayaasha, waxaanna sameyn doonaa taariikh”.
Waxa ay heli doonto kooxda guuleysata, xeerka dhanka garsoorka ee ciyaarta, kooxda doorka martida qaadan doonta, xafladda furitaanka iyo jawaabaha su'aalaha laga yaabo inaad iska weydiineyso Fiinaalka UCL ee caawa